Smartwatches inye a ekeresimesi | Akụkọ akụrụngwa
na smartwatches na-abawanye na ahịa ma ọ bụghịzi ihe iju anya ịhụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-elele ozi ịntanetị ha ma ọ bụ ozi WhatsApp sitere na igwe elekere edobere na nkwojiaka ha. Otu ihe anyị na-amabeghị ka anyị na-ahụ ndị niile na-aza oku ha na ngwaọrụ ndị a, mana ntakịrị nwayọ anyị na-emegharị.
Nke a ekeresimesi ndị a obi abụọ adịghị ya na ha ga-eso n’onyinye kpakpando ọ bụkwa na ọtụtụ mmadụ na-achọ ịnwe smartwatch. Ọ bụrụ n ’ị na-eche ịnye nwanne gị nwoke ma ọ bụ ezigbo enyi gị smartwatch, taa anyị chọrọ ịnye gị ndepụta nke ụfọdụ smartwatches kachasị mma n’ahịa ma nke ahụ ga-abụrịrị ihe na-akụ egwu, nye ya onye ọ bụla i nyere ya.
N'ime ndepụta a ị nwere ike izute 7 smartwatches nke kasị pụta ìhè na ahịa, na agbanyeghị na ọ bụghị ha niile, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịsị na ụfọdụ ndị kachasị mma. Anyị etinyekwala ngwaọrụ nwere ọnụahịa dịgasị iche iche, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ nweghị onye kwenyesiri ike na ị, ị nwere ike ile anya mgbe niile maka elele anya ndị ọzọ, nke abanyelarị narị otu narị na ahịa
1 Moto 360 ọgbọ nke abụọ
3 Alcatel OneTouch Nche
5 Obere oge
Moto 360 ọgbọ nke abụọ
Motorola bụ otu n'ime ndị nrụpụta izizi malitere njem ọhụụ nke ịmalite smartwatch. Ọ bụ Moto 360 jisiri ike jide ọtụtụ ndị ọrụ, ekele maka atụmatụ ya mara mma yana atụmatụ ya na nkọwapụta ya.
Nke a nke abụọ nke Moto 360 Ọ na-ejigide usoro ya na usoro nke imewe, yana mekwara ka ụfọdụ n'ime nkọwapụta ya dịkwuo mma, dịka batrị ya ma ọ bụ ihe nhazi ahụ, nke ga-enye anyị ohere iji elekere elekere a rụọ ọrụ ọ bụla.
Motorola echewokwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ma ọ bụ na ọ malitela nsụgharị abụọ dị iche iche nke ọgbọ nke abụọ a nke Moto 360, nke anyị nwere ike ịkpọ kpochapụwo ma ọ bụ nke e mere baptizim dị ka Egwuregwu, na-eche ndị egwuregwu ahụ niile na-achọ idebe ọzụzụ ọzụzụ n'okpuru nchịkwa.
Dị ka ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a, igwe ohuru a Moto 360 enweghi ego belatara na bụ na taa anyị nwere ike ịzụta ya maka ihe 300 euro. N'ezie, onyinye anaghị efu n'ọtụtụ ụlọ ahịa, ma nke mebere ma nke anụ ahụ, ya mere mepee anya gị nke ọma n'ihi na ị ga-enwe ike ịchekwa euro ole na ole.
Ọ bụrụ na ọgbọ nke abụọ nke Moto 360 nwere oke ọnụ ahịa maka gị, ma ọ bụ ụfọdụ njirimara ya anaghị ekwenye gị nke ukwuu, ị nwere ike ịzụta Moto 360 mbụ nke nwere ọnụahịa dị ala karị ma na-atọ ụtọ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile. O nwekwara uru dị ukwuu na ị nwekwara ike ịzụta eriri na ọnụ ala ka ọ ga - enye gị ohere ịhazi ya ka ọ masị gị n'ụzọ zuru oke ma dịkwa ọnụ ala.
Ọzọ nke smart smart nche na ugbu a ahịa bụ mara na mma Samsung Gear S2, nke na - enweta onu ogugu ahia di ukwuu na ahia ma obu na mgbe ohuru ya, gbalita ya ma metu ya aka, obughi ihe ijuanya.
Mgbe ọnụọgụ nke ụlọ ọrụ South Korea gbara mbọ n'ụdị smartwatches, ọ dịcha ka o jisiri ike kụọ ogodo nke ihe ịga nke ọma. Na a okirikiri imewe, a n'usoro bezel na-enye ọtụtụ nke ọrụ nhọrọ na a ukwuu mma batrị jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga, bụ isi ike ya.
Dị ka ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a na dịka ọ dị na Moto 360 ọhụrụ ahụ, akụkụ kachasị njọ nke ngwaọrụ Samsung a bụ ọnụahịa ya na nke ahụ bụ na n'agbanyeghị etu anyị si chọọ anyị agaghị achọta Samsung Gear S2 ọhụrụ a maka ihe na-erughị 350 euro, oke ọnụahịa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile.
Alcatel OneTouch Nche
Ọ bụrụ na anyị na-achọ smartwatch nke na-ezute nke dị mma, mara mma ma dịkwa ọnụ ala anyị nwere ike ịhọrọ maka Alcatel OneTouch Nche, smart smart dakọtara na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla na nke ahụ nwere ọmarịcha ihe mara mma ma dịkwa mma yana ụfọdụ njirimara na nkọwapụta, nke na-enweghị nke ngwaọrụ ndị dị na ahịa, anyị nwere ike ịsị na ọ ruru ọrụ ahụ.
Na mgbakwunye, Alcatel Watch a nwere ezigbo mma nke na-abụghị onye ọzọ karịa ọnụahịa ya na nke ahụ bụ anyị nwere ike ịzụta smartwatch a maka ihe dị ka euro 100.
Ọ bụrụ na anyị kwụsịtụ iji nyochaa smart smart a ntakịrị, anyị ga-egosi na ọ nweghị gam akporo Wear dị ka sistemụ arụmọrụ yana na ọ ga-enye ndị ọrụ nnwere onwe dị n'etiti ụbọchị 2 na 3, na mgbakwunye na usoro nhọrọ dị mma, n'etiti nke bụ ohere ịnweta ozi, ịlele etu obi anyị si dị ma ọ bụ ohere iji nyochaa mmega ahụ anyị.
Ọ bụrụ na anyị anọgide na-achụ nta maka smartwatch nke pụtara ihe niile maka ọnụ ahịa ya, na-eruteghị ngwaọrụ ndị na-abaghị uru, anyị nwere ike ịtụle ohere ịnweta nke ọhụrụ ahụ. Oukitel A28, nke sitere na China nwere ụfọdụ nhọrọ na-adọrọ mmasị na ọnụahịa asịrị.
Ma nke ahụ bụ na jiri nlezianya mee ihe na-echetara anyị ọtụtụ n'ime ngwaọrụ kachasị mma nke ụdị a na ahịa, a smartwatch dị ka ngwaọrụ iji kwado. Kwekọrọ n'Ozizi na iOS na n'ezie gam akporo, ọ ga-ekwe ka anyị mee ma nata oku, nyochaa oge ụra anyị na arụ ọrụ ahụ. N'ezie, dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile nke ụdị a, ọ na-enye anyị ohere ịlele oge, jiri oge ma ọ bụ tinye ụda.
Dị ka anyị kwurula, ọnụahịa ya bụ otu n'ime ebe dị mma nke Oukitel A28 na nke ahụ bụ na ọ bụrụ na anyị chọọ nke ọma na netwọkụ nke netwọkụ Anyị nwere ike ịzụta ya ihe na-erughị euro 70 na ụgwọ mbupu gụnyere. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwe ya maka ụbọchị nke atọ nke ụbọchị atọ ị ga-azụta ya taa ka mbupu ahụ ghara igbu oge.
Pebble bụ otu n'ime nnukwu ntụnye aka n'ahịa ahịa smartwatch, yana ngwaọrụ anyị nwere ike ịsị na ha dị iche na nke ọtụtụ n'ime ndị dị n'ahịa taa. Otu n'ime akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ bụ Obere oge, smart smart nke anyị nwere ike ikwu dị iche, nke onwe ya na nke oge a.
Kwekọrọ n'Ozizi na ngwaọrụ na iOS na gam akporo sistemụ, ọ na-dị ka ihe na-akpali ọzọ ka Apple Watch ma ọ bụ ihe niile gam akporo Wear ngwaọrụ. O di nwute obughi smart smart maka mmadu nile na ọ bụ na ya peculiar imewe, na n'ihi na ọtụtụ obere na-elekọta, ọ bụghị onye ọ bụla na-enwekarị mmasị na ya.
Isi okwu ya siri ike bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na batrị ya ga-enye anyị ohere iji Oge Pebble a maka oge n'etiti 6 na 8 ụbọchị yana na anyị nwere ike ịsị na ọ na-eme maka atụmatụ dị ịtụnanya na ụfọdụ adịghị ike ndị ọzọ o nwere.
Ọnụahịa nke oge Pebble a dị n'etiti euro 200 na 250 dabere na ebe anyị zụrụ ya, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa euro ole na ole, jiri nlezianya mụọ ebe ị ga-azụta Pebble smartwatch ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na ọ dị n'ahịa ruo oge ụfọdụ, Sony Smartwatch 3 Ọ ka bụ otu n'ime nhọrọ kachasị adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iyi ngwaọrụ na nkwojiaka anyị na iji nlezianya hazie, rụọ ọrụ yana karịa ihe niile nwere ọnụ ahịa na-adọrọ mmasị, nke na-ada ada nke ukwuu kemgbe mmalite ya.
Kwekọrọ n'Ozizi na gam akporo na iOS ngwaọrụ ekele na ngwa ulo oru a ụbọchị ole na ole gara aga, na-anọchi maka nhọrọ ya na atụmatụ ya na atụmatụ dị mma na-efuỌ bụ ezie na ọ na-echetara ụfọdụ nche mgbe ochie, ikekwe Sony gaara emeziwanye atụmatụ ya ntakịrị site na ịmegharị oge ọhụrụ.
Dị ka anyị kwurula, ọnụahịa ya bụ otu n'ime nnukwu ndị na - achọpụta ya na nke ahụ bụ na anyị nwere ike ịzụta Sony Smartwatch 3 a maka ọnụ ahịa dị n'etiti euro 100 na 150, n'agbanyeghị na ị ga - enweta ọnụahịa kachasị mma anyị ga - achọ nke ukwuu na netwọkụ nke netwọk.
N'ezie na ndepụta a, anyị enweghị ike ịhapụ itinye ya Apple Watch nke nwetara nnukwu ahịa kemgbe ọ na-akụ ahịa ahịa ọnwa ole na ole gara aga. Site na imewe ihe eji eme ya na onodu ya, onu ahia na otutu oge nke otutu ndi oru na-akatọ, ọ ka bu otu n’ime nnukwu kpakpando nke ahia a n’agbanyeghi akwa ụta nile, na ọ bụ na ngwaọrụ Apple ọ bụla na-ebu honeys metụtara mmeri. .
Hapụ ihe ojii nke Apple Watch a n'akụkụ, anyị nwere ike ịsị na nke a bụ smartwatch zuru oke maka ndị nwe iPhone ọ bụla na ọ ga-enye anyị nnukwu ohere na nhọrọ.
Ọnụahịa ya, dịka anyị kwurula, adịghị ebelata ma ọlị, ya mere, smartwatch a adịghị maka ụdị onye ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị anyị, ị nwere ike ịga na websaịtị gọọmentị nke Apple wee lelee etu enwere ike ịzụta ọnụahịa Apple Watch kachasị mkpa maka euro 419.
Kedu smartwatch nke ị ga - eji mee ekeresimesi a iji nye ma ọ bụ nye?. Can nwere ike inye anyị echiche gị gbasara ya na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » 7 smartwatches inye ma ọ bụ nye onwe gị ekeresimesi a
Etu esi lelee lotiri ekeresimesi 2015